Laacibka reer Weles ee Aaron Ramsey oo ugu dambeyntii go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal – Gool FM
(Arsenal) 12 Okt 2018. Laacibka reer Weles ee Aaron Ramsey ayaa go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda reer London ee Arsenal, xili uu soo idlaanayo heshiiska uu ku joogo Emirates Stadium dhamaadka xili ciyaareedkan.
Wareysi gaar ah uu la yeeshay wargeyska “The Sun” maanta oo jimco ah, ayuu Aaron Ramsey ku sheegay in xili ciyaareedkan uu yahay kiisii ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal, isagoo raaciyay inuu ka tagayo xagaaga soo aadan.
“Waxaan ku joogaa Arsenal heshiis, waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican xili ciyaareedkan”.
Dhinaca kale Warar horey ayaa waxay sheegayeen in xidiga reer Weles uu saxiixi doono qandaraas shan sano ah uu mushahar ah £ 250,000 ka hor inta uusan hakatka ku imaanin wadahadal labada dhinac.
“Wax walba ee kooxda Arsenal ah waxay ahaayeen cajiib, waxaan u moodnay inaan heshiis wada gaari doono, balse taasi ma aysan dhicin, sidaasi darteed waa inaan sii wadaa inaan ciyaaro kubada cagta, isla markaana aan dadaal xoogan ku bixiyo kooxda Arsenal inta ka harsan xili ciyaareedkan”.
“Waa go’aan ay qaateen, taasi waa wax xili kasta kubada cagta ka dhex dheca, kaliya waa inaan sii wadaa ciyaarista kubada cagta, isla markaana aan soo bandhigaa wax walba ee awoodeyda gaarsiisan tahay, intaas waa waxa aan haatan doonayo inaan sameeyo”.
Thierry Henry oo Qarka u Saaran inuu la Wareego xilka Tababare ee Kooxda Monaco iyo Waqtiga loo Magacaabayo oo la Ogaaday